विश्व कप हेर्न रुस पुगेका नेपालीले यसरी फहराए नेपालकाे झण्डा, कति तिरे टिककाे मूल्य?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
रुसमा जारी २१ औँ सस्कंरणको फिफा विश्वकपको रौनकता विश्वभरि मज्जाले छाईरहँदा केही नेपालीहरुले विश्वकप भइरहेको रसियाका प्रत्यक्ष मैदान नै गएर विश्वकपको खेलहरु हेर्ने सौभाग्य पाएका छन् ।
हुन त अहिलेसम्म नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम विश्वकपमा पुगेको छैन । सिधैँ भन्ने हो भने नेपालको विश्वकपमा छनोट त के तत्कालका लागि एसियनकप खेल्ने हैसियत समेत बनाउन सकेको छैन । तै पनि रातो र चन्द्र सुर्य अकिंत नेपाली झण्डा रुसका विभिन्न रंगशालामा फर्फराइरहेको छ जहाँ विश्व फुटबलका चर्चित टिमहरु प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।
आफ्नो देशका लागि धेरै खेलियो, विश्वकप टेलिभिजनमा हेरियो तर यसपाली प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर जुरेको छ मस्कोमा भेटिएकी राष्ट्रिय महिला फुटबलका पूर्व कप्तान जमुना गुरुङले भनिन् । उनीसहित चारजना सेन्ट पिटरबर्गमा मगंलवार भएको फ्रान्स र बेल्जियमको सेमि फाइनल हेर्न रुस आइपुगेका थिए ।
प्रत्येकले खेलको टिकट ७ सय ५० अमेरिकी डलरमा किनेका थिए । गोविन्द प्रसाद गौतम सन् १९८६ मा हाइड्रोमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न रुस आएका थिए । अध्ययन पछि मस्कोमै व्यवसाय गरिरहेका उनी विश्वकप अभि कहिले रंगशाला प्रवेश गरेका थिएनन् ।
थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस् :